आयोगलाई प्रचण्ड–माधव समूहको प्रश्न : पार्टीले हटाएको ओलीलाई किन ‘अध्यक्ष’ भनेको ? – Interview Nepal
आयोगलाई प्रचण्ड–माधव समूहको प्रश्न : पार्टीले हटाएको ओलीलाई किन ‘अध्यक्ष’ भनेको ?
January 12, 2021 January 12, 2021 by Interview Nepal
काठमाडौं, पुस २८ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल पक्षले पार्टीमा बहुमत पक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । प्रस्टरुपमा बहुमत समदस्यहरुको साथ रहेकाले पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा जाने गरी दाबी गर्न आफूहरु आयोगमा नआउने जानकारीसमेत गराएको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताए ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले दलको अधिकारितासम्बन्धी मागदाबी नआएसम्म त्यसको मान्यताससम्बन्धी विवाद निरुपणमा योग पस्न नसक्ने ऐनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।प्रचण्ड र माधव नेपालले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पनि लिखित निवेदन दिएका छन् ।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नपर्ने यो समूहको दाबी छ ।